Mudaharadayaal lagu laayay dalka Hindiya - BBC News Somali
Booliska iyo Mudaharaadayaasha waxaa dhex maray iska horimaadyo gacan ka hadal ah
Ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Hindiya iyada oo ay weli halkoodi ka sii socdaan mudaharaadyada looga soo horjeedo sharciga muranka badan uu ka dhashay ee muwaadinimada ee ay soo saartay dowladda Hindiya.
Taliyaha booliska Uttar Paradesh OP Singh wuxuu wakaladda wararka ee Reuters uu u sheegay iney 32 qof oo kale ay iska horimaadyadaasi ku dhaawacmeen.
Inta ay rabshdaha salka ku haya sharciga faquuqaya muslimiinta ee ay dowladda Hindiya meel marisay socden waxaa ku dhintay 13 qof.
Mudaharaadayaashana waxay halkooda ka sii wadaan dibadbaxyadooda iyada oo ay boolisku sheegeen in la mamnuucay dibadbaxya in waddooyinka laga sameeyo.
Xirfadlayaasha caafimaadka iyo qaar ka mid ah booliska oo wakaaladda wararka ee AFP u warramay waxay sheegeen dadka rabshadahaasi ku dhintay 5 ka mid ah iney ku dhinteen gobolka Uttar Paradesh Jimcihi ayna u dhinteen rasaas ay ciidamada booliska ku soo rideen.
Hase yeeshee, taliyaha booliska gobolkaasi Mr Singh ayaa diiday mudaharaadayaasha Jimcaha dhintay iney u geeriyoodeen rasaas ay ciidamadiisa ku soo rideen.
Hindiya: "go'doon ayaan galin doonnaa Pakistan"
Waxayna warbaahinta maxalliga ay sheegen iney rabshada cusub ay Jimcihi ka dhaceen 10 degmo oo ka tirsan Uttar Paradesh
Jimcaha ayay ahayd maalinti ay mudaharaadyada ugu ballaadhan ka dhaceen magaalada Delhi, iyaada oo kumannaan shacab ah ay bannaanka masaajidka qadiimka ee Hindiya Jama Masjid ee ay isugu yimaaddeen.
Masaajidka Jama ee Delhi
Dad goob joogayaal ah oo u warramay wakaalada wararka ee AFP waxay sheegeen iney arkeen mudaharaadayaal badan oo madaxa ka dhiigayo nabarra soo gaaray awgood.
Wakaaladda wararka ee AFP waxay sheegtay iney mudaharaadayaasha gawaari dab qabadiisyeen booliskuna ay adeegsadeen biyaha xoogga badan oo rabshadaha lagu kala eryo.
Mudaharaadayaashu waxay si weyn uga soo horjeesteen sharciga ay sheegeen inuu bulshooyin si gaar ah u takooraya
Dowladda Hindiya oo isku dayeysa iney rabshadahaasi xakameyso ayaan ku guuleysan iyada oo ay mudaharaadyada sharciga cusub looga soo horjeedo ay socdaan toddobaadki labaad.
Waxayna dowladda Hindiya gobollada qaar ay ka jartay adeegga Interneetka.
Dadka cusub ee la laayey ayaa imanaya maalin un kadib marki khamiisti 3 qof la dilay kumannaan qof oo mudaharaadayaasha ka mid ahna xabsiga loo taxaabay.
Muxuu yahay sharcigan cusub ee muranka dhaliyey?
Sharcigan cusub ee muranka dhaliyey ayaa ah sharciga dib loo habeeyey ee muwaaddinimada (CAA) sharciga oo la sheegay inuu meel kaga dhacayo dastuurka dalka.
Ardayda jaamacadaha ayaa ka mid ah shacabka wadooyinka mudaharaadyada ka wada
Sharciga oo horraanti bishan la meel mariyey, ayaa dadka aan muslimka ahayn xaq u siinaya iney xuquuqda muwaaddinimo helaan gaar ahaanna qoxootiga sharci darrada ah ee ka soo jeeda waddamada Pakistan, Bangladesh iyo Afghanistan.
Dowladda dhexe ee dalka Hindiya waxay sheegtay sharciga inuu yahay mid dhawraya dadyowga diimaha kala duwan aamisnan ee laga tirada badan yahay, balse go'aanka dowladda waxaa ka dhashay cambaareyn iyo caro uga timid xisbiyada mucaaradka iyo hay'adaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha.
Waxaa sida oo kale sharciga looga soo horjeestay maadaamaa uu yahay sharci shacab ka badan 1.7 milyan oo ku nool gobolka Assam oo dal la'aan dhigayo uuna ku qasbayo xerooyinka qoxootiga iney ku sii sugnaadaan.
Haweeney Amerikaan oo lagu "kufsaday" Hindiya
Dadka mudaharaadaya gaar ahaanna muslimiinta sharcigan uu muwaaddinimada u diidayo ee ka soo jeedo seddexda dal ee kala aha Pakistan, Afganistan iyo BAngladesh waxay ka cabsi qabaan iney dal la'aan ku soo dhacan.
Balse Ra'isal wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuu sheegay "sharcigan inuu wax saameyn ah uu u geysaneyn muwaaddiniinta Hindiya oo ay ka mid yihiin Hinduuga, Muslimiinta, Sikh, Jain, Kirishtanka iyo Budshist."
Wuxuu sda oo kale mucaaradka uu ku eedeeyey mudaharaadyada iney iyagu ka dambeeyaan "ayna wadaan warar been ah oo aan raad lahayn" si ay rabshadaha iyo mudaharaadyada halkooda uag sii socdan.
Lamaanihii ay lacagta kala geysay ee Hindiya
21 Sebtembar 2018
Maxkamad ku taalla Hindiya oo cafis u fidisay nin lagu eedeeyey inuu dilay xaaskiisa